Itoobiya oo Albaabada kaxiratay Qurba Joogtii Somaalida Lacag adag oo la dul dhigay iyo Qax kabilawday durba. | Voice Of Somalia
Xukuumada Gumaysiga Itoobiya waaxdeeda socdaalka ayaa soo saartay sharci cusub oo Qurba Joogta Soomaalida lagaga qixinaya Dalkaasi Gaar ahaan kuwa wata Baasaboorada ree Galbeedka oo ladul dhigay Lacag isla marka uu kadhaco Visaha ama dal kugalka ay wataan.
Waaxda socdaalka ee Itoobiya oo aaminsan in Soomaalidu ay Lacago badan iska wataan markaste ayaa joojisay Waraaqdii lasiin jiray Qurba joogta marka uu Visuhu kadhaco ee ay dalka ku joogi jireen, waxaana sharcigani cusub uu booskiisii Visaha kubadalayaa maalin kaste laga saacada uu Visuhu dhaco $ 10, taasi oo Qorsha cusub oo Soomaalida loodagay.
Qorshahani ayaa kaliya Quseeya Soomaalida mana jirto Ummad kale oo Lacago ladul dhigay sida Soomaalida, taasi oo muujinaysa cunsuriyayn iyo midab Takoor lagula kacay dadka Soomaalida ah, ama ha ahaadaan Kuwa ay Gumaysato ee maamulkeeda kuhoos jira ama ha ahaadaan kuwii xorta ahaa ee iyagu is duleeyay e, ruux kaste oo Soomaali ah marka uu Visuhu kadhaco $ 10, calaa Yoom.
Sida aad sawirka ka aragtaan ciidamada Amaanka ee maamulka Addis ababa ayaa bilaabay inay aqalada iyo Goobaha Ganacsiga ugu galaan Soomaalida kaliya, ayna soo aruuriyaan oo soo dhoobaan xarunta waaxda socdaalka, oo 2-arimood kala dooransiisa, kuwaasi oo kala ah inay dalka isaga baxaan iyo inay bixiyaan maalin kaste 10 dollar oo Harmaris ah waliba.
Dalka Itoobiya ayaa waxaa si xad dhaaf ah u daga Qurba joog badan oo Soomaali ah kuwaasi oo caruurtooda kala carara dalalka ree Galbeedka, sidoo kale Soomaalida ayaa maalgashi xoogan kusamaysatay dalkaasi Itobiya markii hore si sahlan u soo dhoweeyay balse dib waxuu ahaa kala soo baxay.
Kadib markii uu sharcigani qalafsan soo baxay ayaa waxaa bilawday Geedi iyo Qax ay dadka Soomaalida ahi kaga baxayaan dalkaasi Itobiya, waxayna inta badan Soomaalidii magaalada Addis ababa u ruqaansatay dhinca magaalada Nairobi ee wadanka Kenya oo aan iyada nafteeda Soomaalida laga jeclayn.